Russell Groupအဖွဲ့ဝင် ထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ University of Sheffieldမှာသင်ကြားလိုပါသလား - Crown Education
Russell Groupအဖွဲ့ဝင် ထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ University of Sheffieldမှာသင်ကြားလိုပါသလား
May 17, 2020 Crown Online Education Fair 2020
“Russell Groupအဖွဲ့ဝင် ထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ University of Sheffieldမှာသင်ကြားလိုပါသလား…”
❒ အင်္ဂလန်နိုင်ငံရှိ တက္ကသိုလ်များဆိုင်ရာ သုတေသနလုပ်ငန်းများတွင် ဦးဆောင်နေသည့် Russell Groupအဖွဲ့ဝင်တက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး လန်ဒန်မြို့ကနေ ရထားနဲ့ ၂နာရီအကွာမှာရှိပါတယ်။ အင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ်သင်ကြားမှုမှာ အားသာတဲ့တက္ကသိုလ်ဖြစ်တာနဲ့အညီ Civil and Structural Engineering, Architecture, Aerospace Engineering, Mechatronic and Robotics Engineeringစတဲ့ ဘာသာရပ်တွေလေ့လာနိုင်သလို Computer Science, Politics, Economics, Business, Law, Social Sciences, Sciencesစတဲ့ဘာသာရပ်တွေကိုလည်း Main Campusဖြစ်တဲ့ (Western Bank)နဲ့ St George’s Campus နှစ်ခုမှာလေ့လာသင်ကြားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
❒ University of Sheffieldမှတစ်ဆင့် Nobleဆုရှင် ၈ဦးတိတိမွေးထုတ်ပေးထားနိုင်သလို Teaching Excellence Framework မှာလည်း Silverရရှိထားတဲ့ University of Sheffieldမှာ Undergraduate Program, Master Programတွေသင်ကြားနိုင်သလို International Foundation Year Programနဲ့ Pre-Master Programတွေကိုလည်းရွေးချယ်သင်ကြားနိုင်မှာဖြစ်ပြီး University of Sheffieldမှာ မြန်မာကျောင်းသားတွေအတွက် ပညာသင်ယူဖို့ ဘယ်လိုအခွင့်အလမ်းတွေရှိတယ်၊ ပညာရေးအရ ဘာတွေလိုအပ်တယ်ဆိုတာကို တိတိကျကျသိရှိနိုင်ဖို့အတွက် “CROWN ONLINE EDUCATION FAIR 2020”မှာ University of Sheffieldတက္ကသိုလ်ရဲ့ တာဝန်ခံနဲ့ တိုက်ရိုက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးနိုင်ဖို့ CROWN Educationက စီစဉ်ပေးထားပါတယ်။
❒ အဆိုပါ “CROWN ONLINE EDUCATION FAIR 2020”ပညာရေးပြပွဲကြီးသည် Covid-19အလွန် ကျန်ရှိတဲ့ (၂၀၂ဝ)ခုနှစ် ကျောင်းဝင်ခွင့်/ (၂၀၂၁)ခုနှစ်အတွက် ယူအက်စ်၊ယူကေ၊ကနေဒါ၊သြစတြေးလျ၊ဆွစ်ဇာလန်၊စင်္ကာပူ၊ထိုင်းနိုင်ငံတက္ကသိုလ်တွေကို ပြင်ဆင်လျှောက်ထားလိုသူ ကျောင်းသား/သူ၊မိဘ/အုပ်ထိန်းသူများအတွက် ကြိုတင်သိရှိထားသင့်သော နိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်များ အကြောင်းရှင်းလင်းပြောကြားမည့်အတွက် နိုင်ငံတကာပညာရေးစိတ်ပါဝင်စားသူမည်သူမဆို လက်လွတ်မခံဘဲ တက်ရောက်လေ့လာသင့်ပါသည်။
❒ ပါဝင်ပြသမည့်တက္ကသိုလ်များစာရင်းကိုကြည့်ရှုရန်၊ ပညာရေးပြပွဲနှင့် ဆွေးနွေးပွဲကို အခမဲ့တက်ရောက်ရန်၊ အောက်ပါလင့်ခ်မှတဆင့် Form ဖြည့်ကာ တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။
Learn more about CROWN Online Education Fair 2020 : https://crown-education.org/crownfair2020/
အင်္ဂလန်နိုင်ငံရှိ Leedsတက္ကသိုလ်ကြီးတွင် ပညာသင်ကြားခြင်း
University Canada West (UCW)မှာ မြန်မာကျောင်းသား/သူတွေအတွက် ပညာသင်ယူဖို့ အခွင့်အရေး
ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားစီမံခန့်ခွဲမှုဘာသာရပ်သင်ကြားလိုသူတိုင်း အတွက် (၂၅%)ပညာသင်ဆုနဲ့သင်ကြားခွင့်ပေးအပ်မယ့် Dusit Thani College
May 30, 2020 Phone Letyar Crown Online Education Fair 2020
[CROWN ONLINE EDUCATION FAIR 2020, June 6, 7] Registration: bit.ly/crownfair ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားဘာသာရပ်သင်ယူမယ့်ကျောင်းသား/သူတွေအနေနဲ့ နိုင်ငံခြားမှာ ပညာသင်ယူတော့မယ်ဆိုရင် အရင်ဆုံး လုံခြုံစိတ်ချရမှုရှိရေး၊ စာသင်စရိတ်သက်သက်သာသာနဲ့ အရည်အသွေးမြင့် ဘွဲ့ဒီဂရီရယူနိုင်ရေး၊ လက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်အတွေ့အကြုံရရှိဖို့သာမက ပညာသင်ဆုတွေနဲ့ သက်သက်သာသာသင်ကြားနိုင်ရေးစတဲ့အချက်တွေကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားလေ့ရှိတတ်ကြပါတယ်။ . CROWN Online Education Fair 2020မှာ မြန်မာကျောင်းသား/သူတွေအတွက် အပေါ်မှာ ပြောပြခဲ့တဲ့အချက်အလက်တွေနဲ့ ကိုက်ညီမှုရှိတဲ့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံနဲ့အနီးဆုံးဖြစ်တဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံက Dusit Thani Collegeနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ . Dusit Thani College(DTC)ဆိုတာက ...
ထိုင်းနိုင်ငံ Stamford International Universityမှာ (၂ဝ၂ဝ-၂ဝ၂၁)ကျောင်းဝင်ခွင့်ကိုပညာသင်ဆုနဲ့ တက်ရောက်ခွင့်ရလိုပါသလား
[CROWN ONLINE EDUCATION FAIR 2020, June 6, 7] Registration: bit.ly/crownfair ❑ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ပညာသင်ကြားလိုသူတိုင်း သိရှိပြင်ဆင်ထားသင့်သည့်အချက်များ... . ❑ တက္ကသိုလ်ပထမနှစ်/GCE O’Level ရမှတ်ဖြင့် Stamford Universityတွင်လျှောက်ထားနိုင်မည့် ဘွဲ့ကြို ဘာသာရပ်များအတွက် ကျောင်းတက်ရင်း internshipရယူနိုင်မည့် အခွင့်အရေးများ... . ❑ ပြည်တွင်းတက္ကသိုလ်များမှ အသိအမှတ်ပြုဘွဲ့လက်မှတ်ကိုင်ဆောင်ထားသူများအတွက် MBA Programများ… . ❑ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ စာသင်(၃)နှစ် + ကျန်(၁)နှစ်ကို ယူကေ-ယူအက်စ်-ဥရောပ-ကိုရီးယား-သြစတြေးလျနိုင်ငံတွင်သင်ကြားပြီး Dual Degreeရရှိနိုင်မယ့်အခွင့်အရေးတွေကို တိတိကျကျသိရှိနိုင်ဖို့အတွက် ...
HNDလက်မှတ်ကိုင်ဆောင်ထားသူများနှင့် အင်္ဂလန်ထိပ်တန်းဘွဲ့လွန်ပရိုဂရမ်သင်ကြားလိုသူတိုင်း ရွေးချယ်သင့်သည့် UWE Bristolမှ (၅ဝ%)ပညာသင်ဆုများ
[CROWN ONLINE EDUCATION FAIR 2020, June 6, 7] Registration: bit.ly/crownfair လက်ရှိမှာ (၂ဝ၂ဝ/၂ဝ၂၁)အတွက် ရည်မှန်းထားတဲ့ ပညာရေးလမ်းကြောင်းတွေ ရပ်တန့်သွားနိုင်မလား... နှောင့်နှေးသွားနိုင်မလားလို့ … စိတ်ပူပန်နေတဲ့ မိဘ/အုပ်ထိန်းသူတွေနဲ့ ကျောင်းသား/သူတွေ... နိုင်ငံရပ်ခြားကို ပညာသင်သွားဖို့ ရည်ရွယ်ထားပေမယ့် အခုချိန်မှာ ဘာဆက်လုပ်ရမှန်းမသိဖြစ်နေတဲ့ ကျောင်းသား/သူနဲ့ မိဘတွေအတွက် Online Education Fair တစ်ခုကို CROWN Education က ပြုလုပ်ပေးသွားမှာ ...